कुन राशिका व्यक्तिले कुन रत्न लगाउने ? – Sanchar Patrika
कुन राशिका व्यक्तिले कुन रत्न लगाउने ?
July 14, 2020 209
काठमाडौं । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार प्रत्येक ग्रहलाई एक विशेष रत्नले संकेत गर्दछ। र जुन रत्न तपाईंले लगाउनुहुन्छ, त्यससँग सम्बन्धित ग्रहले तपाईंले दिने कष्ट कम हुने गर्दछ । उदाहरणका लागि कसैलाई शनिले सताएको छ भने उसले नीलम रत्न लगाउँदा फाइदा हुन्छ।
यी रत्नहरू महंगा हुने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा व्यक्तिहरूले उपरत्न पहिरिनु उचित हुन्छ । उपरत्नहरू सक्कली रत्नभन्दा रासायनिक संरचनामा केही फरक भएपनि त्यसको ग्रह प्रभाव चाहिँ उस्तै हुन्छ ।
माणिक्य (रुबी) : यस अनुसार रुबी अर्थात् माणिक्य सूर्यको रत्न हो । माणिक्य देख्दाखेरी रातो र पारदर्शी हुने गर्दछ । यसलाई सूर्यको प्रकाशमा राख्दा त्यसबाट आगोको समान ज्वाला निक्लेझैं देखिन्छ । यो माणिक्य धारण गरेपछि सूर्य तपाईंको अनुकूल हुन्छ।
यो सिंह राशिको रत्न हो । यसको उपरत्न गार्नेट हो । महंगो माणिक्य किन्न नसक्दा तपाईंले गार्नेट पहिरिँदा पनि हुन्छ । माणिक्यलाई तामा अथवा तामासँग पहिरिनु शुभ हुने उल्लेख छ ।
मोती वा पर्ल : चन्द्रमालाई सकारात्मक प्रभाव पार्नका लागि भने मोती पहिरिनु उचित हुन्छ । मोती देख्दा कमलो र सौम्य देखिन्छ । जो व्यक्तिमा मानसिक उत्तेजना र तनाव धेरै हुन्छ, त्यस्तो मान्छेले मोती धारण गर्नु उचित हुन्छ । यो मिथुन राशिवालाहरूका लागि धेरै उचित हुन्छ । मोती किन्न सक्नुहुन्न भने तपाईंले मुनस्टोन, सफा मुंगा तथा ओप पहिँरदा पनि हुन्छ । यो वर्गको रत्नलाई चाँदीमा पहिरिनु उचित हुन्छ ।
मुगा (कोरल) : मंगल रत्न मुगा देख्दाखेरी मोतीजस्तै रातो रंगको हुन्छ । यो अण्डाकार तथा तीनकुने आकारमा उपलब्ध हुन्छ । जसको कुण्डलीमा अशुभ योग बनेको छ, त्यस व्यक्तिले मुगा पहिरिनु उचित हुन्छ ।
यो लगाउनुपूर्व अनुभवी ज्योतिषसँग सल्लाह लिनु उचित हुन्छ किनभने मेष र वृश्चिक दुवै राशिका लागि यो शुभ हुन्छ, तर यसको असर दुवै राशिमा फरक—फरक हुन्छ । यसलाई राजनीतिज्ञ, सेना, प्रहरी तथा अस्पताल र घर निर्माणमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले समेत लगाउन सल्लाह दिइन्छ । तर यसलाई नीलम, हीरा, गोमेद र लहसुनियासँगै कहिल्यै पनि नलगाउन सल्लाह दिइन्छ । मुगा किन्न नसक्नेहरूले लाल हकिक, तामडा अथवा संगसितारा पहिरनु उचित हुन्छ । मुंगालाई तामा या सुनसँगै पहिरिनु उचित हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : मनमनै जप्नुहोस् यो मन्त्र, सबै दु:ख कष्ट हराएर जानेछन्
पन्ना (एमराल्ड) : बुध राशिका लागि हो यो रत्न । विद्यार्थी तथा अध्ययन–अध्यापनमा लागेकाहरूका लागि पन्नाको प्रयोग अत्यन्त लाभकारी मानिन्छ । हल्का हरियोदेखि गहिरो हरियो रंग हुने पन्ना लगाउँदा बुधको दोष निवारण हुने ज्योतिषीय मत छ । मिथुन तथा कन्या लग्न भएका व्यक्तिहरूले पनि यसलाई पहिरिन सक्छन् । पन्ना धेरै महंगो पनि हुन्छ । यो किन्न महंगो हुन्छ भने तपाईंले यसको सट्टामा जेड, एक्कोमेरिन, फिरोजा तथा आनेक्स समेत पहिरन सक्नुहुन्छ । पन्ना र यो वर्गीय रत्नलाई चाँदीमा लगाउनु उचित हुन्छ ।
पुखराज (टोपाज) : यो गुरुरत्न हो । आध्यात्मिक उन्नतिका लागि यो पहिरन्छिन् मान्छेहरू । धनु तथा मीन राशिका व्यक्तिले यो लगाउने हो भने त्यसले सौभाग्य वृद्धि गर्ने ठानिन्छ । यो हेर्दाखेरी पारदर्शी देखिन्छ । सेतो तथा पहेंलो रंगमा पाइन्छ । पुखराजको उपरत्न टाइगर, सुनहरा, पहेंलो हकिक हुन् । यसलाई सुनको अष्टधातुमा पहिरिनु उचित मानिन्छ ।
हीरा (डायमन्ड): शुक्र ग्रहका लागि हीरा पहिरिने गरिन्छ । यसबाट शुक्रको गलत प्रभाव रोक्न मद्दत मिल्ने बताइन्छ । विवाह र प्रेम सम्बन्ध अनुकूल बनाउनका लागि पनि हीरा लाभकारी छ । यसलाई चाँदी अथवा प्लेटिनमसँग लगाउन सकिन्छ । हीरा अत्यधिक महंगो हुने भएकाले यसका उपरत्न जर्किन, स्फटिक, पुखराज, ओपल यसको सट्टामा लगाउन सकिन्छ ।
नीलम (ब्लु सफायर): यो शनिको रत्न हो । भन्ने गरिन्छ कि भारतीय कलाकार अमिताभ बच्चनले समेत आफ्ना असफलताका दिनमा नीलम पहिरेकै कारण आप्mनो गुमेको ‘स्टारडम’ फिर्ता पाएका थिए । नीलम देख्दाखेरी हीराजस्तो भएपनि यो नीलो रंगको हुन्छ । कन्या राशिका लागि यो शुभ मानिन्छ । नीलम पनि अत्यधिक महंगो पत्थर हो । यस्तो अवस्थामा एमेथिस्ट, लाजवर्त, ब्ल्याकस्टार, गैनमेटल तथा ब्लुटोपाज पहिरिन सकिन्छ । यसलाई पनि सुनमै राखेर पहिरिनु उचित हुन्छ । नीलमलाई सुनमा प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : जति पढ्दा पनि पटक्कै याद हुँदैन ? यी फर्मुला फलो गर्नुहोस्
गोमेद : व्यक्तिको जीवनमा रहेको राहुको प्रभाव हटाउन गोमेदले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ज्योतिषीहरू मान्दछन् । मानसिक उथलपुथल, गलत निर्णय तथा विना कारण भइरहेको नोक्सानी रोकेर गोमेदले व्यक्तिको जीवनमा प्रेम, समृद्धि तथा खुशियाली ल्याउने ठानिन्छ । गोमेदलाई चाँदीमा राखेर लगाउनु उचित हुन्छ । गोमेदको उपरत्न अरेन्ज जर्किन तथा हेसोनाइट हो ।
लहसुनिया : केतुको शान्तिका लागि यो पहिरनु आवश्यक मानिन्छ । केतुको उपरत्न क्याट्स आई तथा एलेग्जेन्ड्राईट हो । यी दुवै रत्नलाई चाँदीमा राखेर प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ।
Prevजब उडिरहेको विमानमा ‘बम’ भएको सूचना आयो
Nextअयोध्याबारे अनुसन्धानकर्ता पौडेल भन्छन् -सक्कली अयोध्या नेपालमै,ओलीको दाबी सत्य
नयाँ अध्ययन भन्छ – दैनिक ६ पटक हात धुँदा भाइरस संक्रमणको सम्भावना कम
२ करोड ५५ लाखमा बिक्यो महात्मा गान्धीको चश्मा